I Kôrea Atsimo dia firenena ao amin' ny faritra atsimon' ny Saikanosy Kôreanina, ao Azia Avaratra-Atsinanana. Ny renivohiny dia i Seoul. Ny anarana ôfisialin' ny Repoblikan' i Kôrea Atsimo dia Repoblikan' i Kôrea amin' ny teny malagasy ary 대한민국 / Daehan Minguk amin' ny fiteny kôreanina. Miaina ao amin' ny renivohi-pirenena Seoul ny 50 %n' ny Kôreanina Tatsimo. Anisan' ny tanàna be mponina indrindra eto an-tany ny tanànan' i Seoul, ary ny lahatsoratra sasany dia milaza fa izy io no tanà na lehibe indrindra eto an-tany manaraka amin' i Tokyo ao Japàna.
Ny tantaran' ny Kôrea Atsimo dia nanomboka tamin' i Gojoseon Dangun Wanggeom. Resin'ny Sina entin' ny fiankohonana Han ny Gojoseon. Rehefa nitontongana tokoa i Gojoseon dia maro ireo firenena nipoitra toa an' i Buyeo sy i Okjeo sy i Dongyae ary i Samhan. I Baekje sy i Goguryeo ary i Silla no nahery indrindra tamin' izy ireo. Ny fe-potoana nisian'ireo fanjakana ireo dia antsoina hoe Fotoan'ny Fanjakana Telo. Resin'i Silla niaraka tamin'ny mpanohana Sinoa nentin'ny fiankohonana Tang ny Fanjakana Goguryeo ary Baekje, ary navondron'i Silla ho tokana ireo fanjakana telo ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôrea_Atsimo&oldid=1045828"
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2022 amin'ny 16:54 ity pejy ity.